Qatar Airways mbụ ịbanye na ikpo okwu IATA CO2NNECT
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Qatar Airways mbụ ịbanye na ikpo okwu IATA CO2NNECT
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • investments • News • ndị mmadụ • Akụkọ na -agbasa ozi Qatar • Ịrụ ọrụ • Sustainability News • Technology • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Qatar Airways mbụ ịbanye na ikpo okwu IATA CO2NNECT.
A malitere ọrụ pilot ahụ n'ụzọ anọ (4), na-atụ anya ịgbatị na netwọk ibu ya nke ihe karịrị ebe iri isii (60) na-ebu ibu na ihe karịrị otu narị iri anọ (140) njem njem n'ụwa nile.
Ihe omume a na-eguzobe ihe dị ịrịba ama n'ụwa niile n'ebe ikuku ebugharị ikuku.
Cargo Airways Qatar chọrọ idu ụzọ n'imezu atụmanya ndị ahịa maka ụkpụrụ kachasị elu nke nkwado gburugburu ebe obibi.
Onye na-anya ụgbọelu na-eji usoro ụlọ ọrụ IATA kachasị mma maka ịgbakọ ikuku CO2 kwa kilogram ibu.
Na mmekorita ya na Airtù Na-ahụ Maka Transportgbọ njem International (IATA), Qatar Airways Cargo, ngalaba ibu nke Otu Qatar Airways, ga-abụ onye mbu ibu ibu ga-esonye na ya obodo ntà CO2NNECT ikpo okwu ma na-enye ihe ngwọta gburugburu ebe obibi ahaziri maka ndị ahịa ya. Kuehne + Nagel, otu n'ime ndị na-ebu ibu ibu n'ụwa, ga-abụ ndị ahịa mmalite maka ikpo okwu, n'ikwekọ na ntinye aka ha na nkwado. Iji mee akara mmekọrịta a, na 01 Nọvemba 2021 Qatar Airways Cargo rụrụ ụgbọ mmiri ikuku ikuku na-anọpụ iche site na Doha gaa Frankfurt, Zaragoza, Liège na Paris.
Isiakwụkwọ ọhụrụ a nke mmemme mmeghe carbon nke afọ ofufo, nke e wuru n'okpuru nche anwụ IATA, na-eguzobe nnukwu ọrụ ụlọ ọrụ iji mee ka decarbonization nke ụgbọ elu mee ngwa ngwa ma na-enyere mbupu ụgbọ elu aka ịghọ onye na-anọpụ iche carbon site n'inye ngụkọta carbon na nkwụghachi ụgwọ n'etiti. Qatar Airways, ndị na-ebu ụgbọ mmiri, na ndị na-ebugharị ibu dị ka Kuehne+Nagel. Ọ ga-enye ndị ahịa ya mmesi obi ike na kredit a zụtara iji mebie ihe ndị a sitere na ọrụ na-ebuga mbelata carbon n'onwe ya, yana uru gburugburu ebe obibi na mmekọrịta ọha na eze.
A malitere ọrụ pilot ahụ n'ụzọ anọ (4), na-atụ anya ịgbatị na netwọk ibu ya nke ihe karịrị ebe iri isii (60) na-ebu ibu na ihe karịrị otu narị iri anọ (140) njem njem n'ụwa nile. Onye na-anya ụgbọelu na-eji ihe obodo ntà ụlọ ọrụ kacha mma maka ịgbakọ ikuku CO2 kwa kilogram ibu. Site na mmemme a, ndị na-azụ ahịa ibu nwere ike iwepụ ihe ndị na-ekuku ikuku metụtara mbupu ibu ikuku, dị ka nzọụkwụ iji nweta nkwa nkwado gburugburu ebe obibi ha. Naanị nkwenye, ogo dị elu yana ICAO CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) ga-eji nkwụghachi ụgwọ ruru eru.
Otu Qatar Airways Onye isi oche, Onye isi ala Mr. Akbar Al Baker, kwuru, sị: "Dịka Qatar Airways bu ụzọ malite mmemme carbon offset maka ndị njem na 2020, anyị nwere obi ụtọ ugbu a ịnye ha nhọrọ nke ibufe ụgbọ elu na CO.2 na-anọpụ iche ụzọ n'ọdịnihu. Qatar Airways Cargo anọwo na-ebute ụzọ na atụmatụ ụlọ ọrụ. Enwere m obi ụtọ maka mbọ anyị na-akwado ịkwado ụlọ ọrụ ụgbọ elu iji nweta ebumnuche mbelata ikuku carbon dị oke egwu. "
Willie Walsh, obodo ntàOnye isi Director General kwuru, "Ebumnuche ụlọ ọrụ nke inweta ikuku carbon net-efu site na 2050 metụtara ma ndị njem na ibu. Ọ chọkwara ndị niile metụtara na ụlọ ọrụ ka ha na-arụkọ ọrụ ọnụ na ịnakwere ngwọta ọhụrụ. Ekele Qatar Airways Cargo maka ịbụ onye mbụ mejuputa CO2NNECT, yana Kuehne+Nagel maka ịbụ onye ahịa mmalite. Ka ụwa na-ezukọ maka nzukọ COP26 iji wusie atụmatụ mbelata carbon carbon zuru ụwa ọnụ, mmalite nke ngwọta nkwụghachi ụgwọ a na-egosi nkwa anyị zuru oke nke ụlọ ọrụ na ibu ikuku na-adịgide adịgide. "
felix lian ekwu, sị:
November 15, 2021 na 08: 26
Anyị na-enye ọrụ mbugharị ibu si China gaa Mexico/Colombia/Chile.